राष्ट्र ध्वजावाहकसँग – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (२५-३१ असार, २०७४) बाट
सबै दलका नेतृत्व डाएसमा बसेका थिए, भीड नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदैथियो, कतिले मञ्चमै उक्लेर ताण्डव गरे। र, डाएसको एकापट्टिको भाग भाँचियो पनि। सुशीलजी भीडलाई संयमित बनाउन माइक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म भने थप मानिसलाई मञ्चमाथि आउनबाट रोक्न थालें, डिलमा बसी खुट्टाले छेक्दै । माओवादी नेतालगायत सबैलाई जोगाउन त्यसो गरियो, तर भोलिपल्ट माओवादी मिडियाले मेरो प्रयासलाई ‘सामन्ती प्रवृत्ति’ को रुपमा चित्रण गरे !
मञ्चमा जमातको चाप बढ्दै र अवस्था झनै अनियन्त्रित बन्दै गयो। त्यसै बेला कसैले मेरो हातमा जेलको डण्डीभित्र कैद ज्ञानेन्द्रको अनुहार भएको ठूलो प्लेकार्ड थमाइदियोजो माओवादीले नै मुद्रण गरेको हुनुपर्छ। अप्रिय घटना हुन नदिनु थियो तसर्थ मैले प्लेकार्डलाई माथि उक्लिएर मन्दिरको आडमा सबैले देख्ने गरी अड्याइदिएँ। त्यसले काम गर्‍यो, वातावरण शान्त हुँदैगयो र कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई आदि नेतासँग मक्ख परी बसेका (आजैसम्मका) ‘नागरिक अगुवा’ हरूले सिन्को भाँचेनन्, म सम्झन्छु ।
‘कनकमणिले राजाको पोष्टर जनताको हातबाट थुते’ भन्ने प्रचार पनि भयो, एक टुक्रा मोन्टाज् भिडियो क्लिपको भरमा । ममा भने सधैं एउटा कौतुहल रहिरह्यो– तनावग्रस्त अवस्था बुझिकन जमातलाई शान्त पार्ने उपायसहित त्यो प्लेकार्ड मेरो हातमा थमाउने को थियो ?
त्यो कौतुहलको जवाफ मैले असार १६ गते शुक्रबार बिहान इच्छुमती (टुकुचा) सफाइ अभियानको बेला पाएँ। नेपालका सुपरिचित ‘झण्डा अभियन्ता’ कालीमाटी घर भएका लक्ष्मीनारायण शिल्पकारसँग त्यहाँ भेट भयो । उनी ज्यान भन्दा ठूलो राष्ट्र झण्डा बोकेर ढल र फोहोर सरसफाइमा लागेकाहरूलाई हौसला दिन आइपुगेका रहेछन्। म उनको तस्वीर खिच्न अघि बढें। बडो आत्मीयताका साथ लक्ष्मीनारायणजीले भने, “चिन्नुभो? तपाईंको हातमा ज्ञानेन्द्रको पोष्टर थमाइदिनेलाई !”
र, एकदशक पश्चात् मैले उनलाई धन्यवाद दिएँ । उनको ‘क्राउड कन्ट्रोल’ सोचले त्यो बसन्तपुर सभालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सघाएको थियो, आजैजस्तो थियो मेरो लागि त्यो क्षण ।
जनआन्दोलनको बेलासम्म उनी पुर्ख्यौली पेशा काठको कारिगरी गर्दारहेछन्, तर लम्बिएको संक्रमणकालमा विस्तारै जनताको आत्मबल खस्किएको देखेर कुनै ‘नागरिक समाज’ मा नलागिकन दौरा–सुरुवाल लगाएर राष्ट्रध्वजा बोकेर एक्लो जनतामाझ हिंड्ने प्रण गरे– धूलो, धुवाँ, घामपानी सबै सहेर ।
आजसम्म आउँदा उनी मुलुकका प्रायः भूभाग घुमिसकेका रहेछन्, र यस अन्तरालमा नागरिकको सोचाइ र मूड फेरिएको देखेछन्। पहिला पहिला झण्डा बोकेर हिंड्दाको परिस्थितिलाई ‘विषम’ नै भन्नुपर्छ। झण्डालाई देश/मुलुक/वतनसँग नभई ‘राष्ट्रवाद’ सँग जोड्न रुचाउँथे माओवादी तथा कतिपय ‘आइडिन्टीटी जुझारु’ हरू ।